एयर प्रो शृंखला
एयर स्पा शृंखला
मिनी एयर 360 को Aerosol प्रदर्शन
AeroCentre को Aerosol प्रदर्शन
एयर मास्क को Aerosol प्रदर्शन
वायु सेना को Aerosol प्रदर्शन
एयर परी Aerosol प्रदर्शन
Feellife Health Inc is an international enterprise specializing in researching, developing, manufacturing and marketing of portable mesh nebulizers. Our vision is to provide the 3rd way of dosing for human beings. FEELLiFE nebulizer-दुइ TITANIUM एक चिप को कोर प्रविधिको महारत छ। हामी विश्वव्यापी मा 10 भन्दा बढी पेटेंट प्राप्त गरेको छ, आईएसओ 13485 र CFDS प्रमाणपत्रहरू बित्यो। र हामी सधैं उत्पादन इस्वी संवत् र एफडीए को स्तर संग पूर्ण अनुपालन मा कडाई सञ्चालन गर्छन्। हाम्रो उत्पादनहरु राम्रो 50 भन्दा बढी देशहरुमा बेचिएको छ र FEELLiFE जाल nebulizer सबैभन्दा विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रूपमा मतदान छ।
आर एन्ड डी अनुभव9वर्ष
nebulizer श्रृंखला मेष 20+
अन्तर्राष्ट्रिय पेटेंट 10+ पेटेंट
तपाईं जाल nebulizers आदेश गर्न तयार हुनुहुन्छ?
FEELLiFE विचारशील ग्राहक सेवा तपाईंलाई उच्च गुणवत्ता उत्पादनहरु प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
सिद्ध र शान्त! एक मेकानिक्स हावा खुम्च्याउने nebulizer रूपमा हल्ला छ प्रयोग। यो फरक संसार छ। , ठीक सानो र पोर्टेबल काम गर्दछ र म ब्याट्री Recharge छ अघि धेरै उपचार रहन्छ।
अत्यन्तै सुविधाजनक, व्यावहारिक मौन म कुनै परेशान बिना मेरो कार्यालय मेरो डेस्क मा यसको प्रयोग गर्न सक्षम छु। मेरो ठूलो खुम्च्याउने nebulizer रूपमा साथै काम गर्दछ। विमान मा लगे। शुल्क रहन्छ। कहीं प्रयोग गर्न हातमा राख्न सजिलो। छैन एक उजुरी। सुझाव दिन्छौं !!
म एक महिना अन्तर्गत एक सानो लागि यो nebulizer प्रयोग गरेका छन् र हालसम्म म संग एकदम खुसी छु। यसलाई चाँडै nebulizer र निरन्तर ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छैन। यो एक मानक USB केबल प्रयोग शुल्क सजिलो छ। यो पनि सफा गर्न सजिलो छ। यो एक वर्ष वारेन्टी आउँछ। आशा छ म यसलाई जरूरत गरिने छैन।
यो मिसिन पुरानो मोल्ड जोखिम कारण मुद्दाहरू उपचार गर्न हाम्रो कार्यात्मक चिकित्सा डाक्टर सिफारिस भएको थियो। उहाँले विशिष्ट nebulizers बस चिकित्सा रूपमा गहिरो फेफडों मा छुटकारा छैन भन्छन्। हामी हालसम्म यो एउटा राम्रो अनुभव झेलिरहेका छन्।
म व्यवस्था मेरो आमाले सम्पूर्ण जीवनको लागि अस्थमा देखि पीडित गरिएको छ जो लागि यो किनेको। यसलाई सजिलै यो वरिपरि वहन गर्ने एक धेरै राम्रो जिप बैग संग आए। उपकरण नै राम्रो बनेको छ। बाहिर धेरै चिल्लो सामाग्री। सिफारिस!
यात्रा को लागि यो पायो। साँच्चै ठूलो काम गर्छ।
कारण आफ्नो उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव गर्न 4000 भन्दा बढी ग्राहकहरु हामीलाई विश्वास द्वारा संचालित।
अब हामीलाई सामेल
वर्ष आर एन्ड डी अनुभव
टुक्रा / दिन
विकल्पहरू लागि श्रृंखला
हालैका सुझाव र समाचार
हेर्न थप पोस्ट +
शेयर पोस्ट ( 12) पसंदीदा ( 12) टिप्पणिहरु ( 12)
सोमबार शुक्रबार 9am --6pm
सनिबार आइतबार बन्द गरियो
मर्मतका र समर्थन
हाम्रो उत्पादनहरू वा मूल्य सूची बारे अनुसन्धानका लागि, कृपया हामीलाई आफ्नो इमेल छोडेर हामी 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा हुनेछ।